China Focus RF Anti Wrinkles Machine vagadziri uye vanotengesa | Kunaka
Tarisa RF Anti Wrinkles Machine
40.68mhz Monopolar Focus RF tekinoroji
Thermolift ine Vacuum yechiso, maziso
Handlepiece Pic Rinoshanda
Unipolar RF inoshandisa Unipolar RF simba kuti ikurumidze metabolism yemadipose tishu, zvichioneka kutsetseka kweganda.vadzvinyiriri vakawedzera simba reRF munzvimbo dzakadzika dzeganda pasina kusagadzikana kwemurwere.
Bvisa RF BiPolar RF ine magetsi emagetsi inogadzira yemuno, pamusoro pekupisa kupisa
Thermolift inoratidzira Dielectric Heating- yakasarudzika mashandiro ayo makuru radiofrequency (RF) simba re40.68 MHz (kutumira mamirioni makumi mana emamiriyoni emamiriyoni nemasere pasekondi) inopfuudzwa yakananga kumatishu, zvichikonzera kutenderera nekukurumidza kwemamorekuru ayo emvura. Izvi
kutenderera kunogadzira kukweshesana uko kunogadzira kupisa kwakasimba uye kunoshanda. Nekuti ganda rinoumbwa kazhinji nemvura, kudziya kunobva pamushini uyu kunokonzeresa kudzikama mukati meganda- kubatira tambo dziripo uye kukurudzira
kuumbwa kweiyo collagen nyowani apo ichivandudza ukobvu hwayo uye kuenderana. Iyo yakakwira RF frequency inobvumira yakadzika, yakafanana kupisa iyo inogadzira yunifomu mhedzisiro.
● Dual RF modes inoburitsa kupisa kwekurapa mukati meakanangwa maturu munzira mbiri:
BiPolar RF simba inogadzira yemuno, zvepamusoro dermal kudziyisa
UniPolar tekinoroji inoburitsa yakadzika simba reRF pazvikamu zvakadzika zveganda pasina kusagadzikana kwemurwere.
● In-Inofamba ™ Technology
In-motion TM tekinoroji inomiririra budiriro mukunyaradza kwevarwere uye
nzira yekumhanyisa, ine inodzokororwa kliniki mhedzisiro. Iyo yekutsvaira In-kufamba
hunyanzvi hunosanganisira kufambisa anoshandisa kakawanda pamusoro penzvimbo yakanangwa,
kuisa simba pamusoro peiyo huru gridhi yekumisazve uye contouring yenzvimbo hombe.
In-inofamba inopa zvishoma nezvishoma kuvaka-up kwekupisa mukati meiyo yakatarwa maturu kusvika iyo
inosvika patembiricha yekurapa, ichipa kurapwa kwakanyanya
pasina njodzi yekukuvara.
Pashure: Vertical Physiotherapy Diathermy RET CET Muchina Wemuchina
Zvadaro: Mini fractional rf mudziyo